मनसुनजन्य विपद्बाट २६ जिल्ला प्रभावित | Chhatapost.com
Home Breaking News मनसुनजन्य विपद्बाट २६ जिल्ला प्रभावित
मनसुनजन्य विपद्बाट २६ जिल्ला प्रभावित
काठमाडौँ, १६ असार । यसपालि मनसुन सुरु भएलगत्तै गत जेठ अन्तिम सातादेखि परेको भारी वर्षाले सिन्धुपाल्चोक र मनाङसहित देशका २६ जिल्ला प्रभावित बनाएको छ । बाढी पहिरोमा परी ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।
बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएकामध्ये एक हजार ६०० जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट कुल २६८ जना र सबै सुरक्षाकर्मीको प्रयासमा ४०० भन्दा बढीको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसपालि बाढी पहिरोबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा हेलिकप्टरमार्फत राहत पु-याइएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको निजी आवास पुनःनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय भएर लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म तीन हजार ९४९ लाभग्राहीको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु. १९ करोड ९७ लाख ७३ हजार रकम वितरण गरिसकिएको छ । सोही प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त रु. १० करोडमध्ये नुवाकोट जिल्लाबाट लाभग्राहीलाई अनुदान स्वरुपको वितरण कार्य प्रारम्भको तयारी गरिएको मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी जनाएको छ।
यसवर्ष सोही प्रयोजनका लागि रु. दुई करोड ८६ लाख विनियोजन भएको र सो वितरण प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मनसुनजन्य विपद्बाट वेपत्ता भएकाको खोजीलगायत जनधनको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकाय क्रियाशील रहेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले निरन्तर वर्षा भइरहेकोले जोखिममा रहेका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले खोज, उद्धार तथा राहतलगायत कार्यमा खटिने सबै निकाय र प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिएको छ ।
Previous articleचिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको १०० वर्ष पूरा
Next articleचिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य ९ करोड ५० लाख